Inbaddan oo kamid ah saaxiibadayda waxay daawadaan filimaan galmo ah. Anigu waxaan ahay wiil 14-sanno-jir ah waxaana ku raaxaystaa daawashada filimaantaasi. Sidoo kale waxaan jeclahay in aan daawado filimaantaan. Laakiin saaxiibadaydu waxay dhahaan waa in ay ahaato mid sir ah. Oo aanan waxna u sheegin dadka waaweyn. Maxay sidaasi u tahay?
Dhalinyarada ay ka yartahay da’doodu 18 sanno looma oggola in ay daawadaan filimaanta galmada ah.
Sidoo kale dadka waaweyn waa in aysan u oggolaanin dhalinyarada yar-yar in ay filimaantaasi daawadaan.
Waa mid sharci daro ah.
Sharciga waxaa loo dejiyay si uu u ilaaliyo gabdhaha iyo wiilashaba.
Dhalinyaradu waxay baranayaan khibrada galmo markii ugu horaysay.
Waa in ay ayagu oggaadaan waxa ay jecelyihiin.
Waxa ayaga ku habboon.
Iyo waxa aanan ku habboonayn.
Filimaanta galmada midaasi ayay saamayn ku yeelan karaan.
Dhalinyarada waxaa dhici karta in ay hore u lahaayeen waxyar oo khibrad ah oo galmada ku saabsan.
Sidaas darteeda filimaanta galmadu waa kuwo wareer leh.
Filimadaan kaliya waxay muujiyaan galmo lagu sameeyay kaamarada horteeda.
Dadka iyo dareemahoodu waa kuwo inta baddan aanan ahmiyad ku lahayn filimaantaan.
Laakiin dhalinyarada qaarkooda waxaa dhici karta in ay nafsadooda bar-bardhig kula sameeyaan dadkaan filimaanta jilaaya.
Waxa ay dadkaan sameeyaan waxaa dhici karta in aysan adiga kugu habboonayn.
Iskaba dhaaf waxaa dhici karta in aad dareentid dembi marka aad daawatid filimaantaan.
Sidaas darteeda dhalinyaradu waa in aysan daawanin filimaanta galmada ah.